Fanapariaham-pahefana : ahoana ny amin’ny famindrana ny vola iasana ?
Nasain’ny fitondrana ankehitriny nolanian’ny Antenimieram-pirenena an-katerena ny fitambaran’ny lalàna vaovao mifehy ny fanapariaham-pahefana tamin’ny 2014 : ny lalàna 2014-018, 2014-020 sy 2014-021, ary ny didy fampiharana vitsivitsy mikasika ny fananganana ny rafitra miara-mandinika ny asan’ny olom-boafidy eny an-toerana, momba ny fitantanana ny toe-bolan’ny vondrom-bahoaka sy ny fiaraha-miasa mipariaka. Misy didy fampiharana hafa nampanantenaina mbola andrasana, ny...
Iza no mandidy, eto Madagasikara ?
Ny 30 aogositra 2016, ilay ramatoa Iraka manokan’ny Komitin’ny Vondrona Afrikana dia nitaky ny hampiharana ny fepetran’ny Tondro zotra hivoahan’i Madagasikara amin’ny krizy natao sonia ny 16 septambra 2011. Ny fahatongavany teto Antananarivo fotsiny anefa dia porofo mivaingana fa efa tena nifarana tanteraka tamin’ny fomba ofisialy ny krizy teto Madagasikara ! Kanjo indro izy fa mbola nandidy ny Malagasy indray tsy hieritreritra hanao fifidianana filoha alohan’ny fotoa...
Herinandro vitsy sisa dia hatao eto Antananarivo ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia, nefa samy mbola vaka daholo ny sain’ny rehetra. Ny maha sahirana ny manam-pahefana dia ny hampiaiky fa tsy misy mihitsy ny olana hany ka arantiranty avokoa izao ravaka rehetra mety hahajemby ny mason’ny Filoham-pirenena nasaina izao. Fa mangina tanteraka kosa izy momba ny volam-panjakana holaniana amin’io fihetsiketsehana io ary momba ny fifanekena PPP nifanarahana ao amin’ny sehat...
Ny lalànantsika, hatao inona ?
Mihambo ho tany tan-dalàna i Madagasikara. Saingy inona no antony hanaovana lalàna raha, manerana ny vazan-tany efatra eto amin’ny firenena, dia samy manosihosy azy sy mivily amin’ny lalàna daholo na ny olom-pirenena na ny mpitondra fanjakana manomboka aty amin’ny fotony ka hatrany amin’ny fara tampony ? Nefa ny lalàna dia natao hampiharina.
Nandritra ny fivoriany ara-potoana ny 3 mey ka hatramin’ny 1° jolay 2016, ny Antenimieram-pirenena dia nandany ny 28 tamin’i...
Ny fitondrana Rajaonariamampianina eo an-tsasa-dalana
Eo an-tsasa-dalana izao ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny amin’ny fe-potoana iasany. Tsara tohan’ny mpomba azy izy ka mbola mandrangaranga hatrany ho voafidy ara-pomba demokratika, tahaka ny solombavambahoaka ary ny sasantsasany amin’ny loholona sy ny mpiandraikitra ny kaomina ankehitriny. Ary marina izany. Eo amin’ny endriny ivelany. Fa na dia eo aza ny hetsika eo amin’ny filazam-baovao ataon’ny manam-pahefana mba hiarovana ny Fanjakana, tsy maintsy tombanana ami...
Ny fahefana, hiasa ho an'iza ?
Efa hatramin’ny 1960 i Madagasikara no nitady izay lalan-kizorany. Raha mampitsiriritra ny dingana ho an’ny fandrosoana vitan’ny firenena nitovy lenta taminy, ny fari-piainana eto amin’ny Nosy kosa dia tsy mitsaha-mikororosy fahana. Mizaka ny tsy eran’ny aina ny mponina nefa tsy afa-manoatra fa dia ny mikomy ombieny ombieny amin’ny mpanao politika sisa vahaolana hitany, ireo no mampahantra sy manosihosy azy ary tsy mba mihevi-tena ho diso na oviana na oviana. Ny mpito...
Asa sy fampandrosoana
Tamin’ny oktobra 2015 ny governemanta dia nanainga ny Politikam-Pirenena momba ny Asa sy ny Fiofanana araka Asa, niara-noketrehina tamin’ny BIT1 sy ny UNESCO2. Izany politika izany dia noheverina hoenti-manatontosa ny fanirian’ny Fanjakana hampisonanina ny tsirairay ao anaty fiainana milamina ; izany dia mitaky ny tsy maintsy anaovany izay hahatonga « ny ankamaroan’ny Malagasy ho olom-pirenena nahazo fanabeazana ara-tsaina sy fahaiza-manao hahafahany mamorona sy mahit...
Rafi-pitsarana mampiroborobo ny tsy maty manota
Nanomboka ny 11 aprily farany teo dia notanterahin’ny mpirakidraharaha ny fanambarany hitokona. Dia mihitsoka mandritra ny fe-potoana tsy voafetra ny raharaham-bahoaka ary tsy misy miantoka raharaha na dia kely aza. Tsy toe-java-baovao io fikatsoana io fa, araka ny mahazatra, dia ny olona manan-draharaham-pitsarana no mivesatra sy tsy maintsy miaritra azy, nefa tsy fantany mazava akory izay fitakiana tsy nahazoana fahafaham-po nahatonga io fitokonana io. Nandova an’io...
Nisy volavolan-dalàna mametra ny « fitsipika mifehy ny fandaminana ny Fokontany sy ny asany ary ny andraikiny » nolanian’ny Filankevitry ny governemanta tamin’ny talata 9 febroary 2016. Fehezanteny iray mamarana ny filazana no mampahafantatra antsika tsy sazotsazoka fa niroso tamin’ny famakiana voalohany an’io volavolan-dalàna io ny Filankevitry ny minisitra ny 17 febroary. Natao an-kifonofono tsy nakana hevitra na tamin’iza na tamin’iza afa-tsy ny an-dry zareo samy m...
Tamin’ny anaran’ny Fanjakana sy ny vahoaka Malagasy ireo mpitondra antsika, ny 30 novambra 2014 tany Dakar, dia nanolo-tena ny hampiantrano eto Antananarivo ny Fihaonana an-tampon’ ny Frankofonia amin’ny novambra 2016. Tsy afaka ny hihemotra intsony ho fitandroana ny voninahitry ny vahoaka manontolo. Efa nanome toky ny Fanjakana, tsy maintsy tanterahiny ny toky nomeny : efa tongotra mby andakana ka tsy afa-kihemotra intsony. Anjaran’ny Fanjakana izao ny mampis...
Manotrika atody lamokany...
Nisavoritaka izay tsy izy ny fiantombohan’ny Repoblika faha IV ka mba nanantena ny vahoaka fa handray an-tanana ny raharaha ny filoha Rajaonarimampianina ary hanome an’i Madagasikara an’ilay sori-dalana sy ilay tosika tena nilainy mafy saingy tsy nananany. Diso fanantenana anefa ny vahoaka satria dia taona iray very indray ny 2015 ary mbola miandry foana izay mpitondra sy tetik’asa hampiainga azy ny firenena…
Tahaka ny fia...
Tamin’ny 25 septambra farany teo, ny tany mpikambana ao amin’ny Firenena Mikambana dia nankatoa ireo Tanjona 17-n’ny Fampandrosoana Maharitra (ODD). Ireo no nasolo ny Tanjona 8-n’ny Taonarivo Fahatelo ho an’ny Fampandrosoana (OMD) izay namaritra ny fanampiana ny fanjakana ho an’ny fampandrosoana nanomboka ny taona 2000 ka hatramin’ny 2015. Ny ODD dia hampiharina manomboka ny 1° janoary 2016, ny tanjona amin’izany dia ny hanafoana ny fahantrana alohan’ny 2030, « sady h...
Iaraha-mahita fa mitatra ny fahoriana. Ana hetsiny maro ny tanora tonga eo amin’ny tsenan’ny asa isan-taona no tsy mahita fomba na iray aza hiatrehana ny filan’ny tenany sy ny an’ny fianakaviany, raha toa ka tany sy tafo ary asa no kely dia kely indrindra tsy maintsy atolotry ny fiarahamonina ny mponina1. Manoloana izany, ahoana ny amin’ny safidy politika ara-toekarena voasoratra ao amin’ny Drafi-pirenena ho an’ny fampandrosoana (PND) ? Mety hamaly ny hetahetan’ny vah...
Iray volana izay no lasa taorian’ny fifidianana kaominaly sy monisipaly teto Madagasikara. Sarotra ho anay fiarahamonim-pirenena malagasy ny hitatitra ao anatin’ny andininy vitsivitsy ny zavatra tsikaritra rehetra tamin’izany. Ny sasany taminay, manam-pahaizana manokana mikasika ny fanaraha-maso ny fifidianana, dia efa namoaka fanamarihana vitsivitsy. Nanoina ny antson’ny minisiteran’ny Atitany sy ny Fanapariaham-pahefana koa izahay mikasika an’izay handimby ny CENI-T...
Efa notakiana hatry ny ela ny fifidianana ben’ny tanàna ary mety ho tante-raka ihany amin’ny zoma 31 jolay2015 araka ny voalaza. Hita aloha fa ny tena nahasarika kokoa ny sain’ny mpanao gazety dia tsy io mihitsy fa ny fihamba-hambana efa ho lava ataon’ny fitondrana fara tampony sy ny kajikajy politika isan-karazany, satria mantsy io angamba no mety hahitana marina izay tena herin’ny mpifanandrina samihafa manoloana ny fifidianana : zaran’ny antoko sy ny kandidàny koa ...
Ny fampianarana avy amin'ilay didim-pitsarana
Nangataka ny hanonganana ny Filoha ny Antenimieram-pirenena, nolavin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) anefa izany ka nisahotaka ny mpanao politika ary lasa eritreritra ny vahoaka. Ireny toe-javatra ireny anefa dia ampahany mipoitra kely ety ivelany fotsiny amin’ny disadisa lalim-paka mbola mampikatso ny fiainam-pirenena.
Tsy azo ivalozana ny fanapahan-kevitry ny HCC, manaiky izany ny SeFaFi. Nefa izany akory tsy ...
Tonga ny efa nampoizina. Ilay fihaonambe, nambara fa an’ny firenena, dia nangataka ny « fandravana » - izay natao hoe « fanamboarana » taoriana kely – ny Andrim-Panjakana rehetra ary izany no nampiharihary ny fifanolanana nihotrika tao amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Antenimieram-Pirenena, eny fa na dia nampanjariana ho « tolo-kevitra tsotra »1 fotsiny aza ireo « fehin-kevitra » izay nankatoavin’ny Filohan’ny Repoblika an-jambany ka hoe hampiharina. Na dia tsy ara-...
FFKM : fampihavanana sy kitoatoa politika
Dia notanterahin’ny FFKM (Filankevitry ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) tokoa ilay Zaikabem-pirenena izay natao tao amin’ny CCI Ivato ny 28 aprily ka hatramin’ny 2 mey 2015. Ny tanjona nokabariana tamin’izany dia hoe « ny fampihavanam-pirenena ». Roa taona lasa izay, nandritra ilay fiarahamidini-pirenena izay natao ny 2 ka hatramin’ny 4 mey tao amin’io toerana io ihany, dia efa nanandrana nanao tery vay manta ny heviny izy, ary azo fehezina amin’ireto dokam-b...
Ny kaominaly : finiavana hitsinjara fahefana toy inona moa ?
Ny lalàna ilaina hanaovana ny fifidianana kaominaly ny taona 2015 dia nankatoavina sy tafavoaka ihany na dia nanahirana aza. Tsy iverenana intsony ny fomba nisavorovoro nentina nanolotra ireny lalàna ireny, novaina, notsipahina manontolo na tamin’ny am-pahany noho izy tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, dia nankatoavina, ary farany – ela ny ela – mba navoaka ihany..., saingy mbola tsy tafavoaka daholo akory izy rehetra. Ireny fiovaovana ireny dia nampientanentana ...
Andro ratsy dia fihotsahana
Mbola tsy notandindomin-doza tahaka izao mihitsy ny firenena. Raha orana mikija no mirotsaka aty anivon-tany, indrindra eto an-dRenivohitra, dia haintany sy kere kosa no mianjady amin’ny faritra sasany any atsimo tao ho ao. Ny harivan’ny 5 marsa 2015, ny tarehimarika vonjy maika navoakan’ny BNGRC (Biraom-pirenena misahana ny loza sy ny antambo voajanahary) momba ny tondra-drano mahazo ny faritr’i Vakinankaratra, Analamanga ary Alaotra-Mangoro dia milaza fa nisy maty 2...
Dimampolo taona katroka izay no nampanantenan’ny mpitondra paradisa ho antsika. Na sosialista na malalaka dia paradisa hatrany no arangaranga aorian’ny krizy, sy amin’ny fiantombohan’ny fahefana vao norombahina: ho resy ny fahantrana ary ho tafaverina ny fandriampahalemana, ho voatsabo ny marary ary hahazo fanabeazana ny ankizy, hahazo trano ny tsy manan-kialofana ary hahazo asa ny tsy an’asa. Fampanantenana hadino vetivety, satria mbola vao mainka mihalalina ny fahan...
Ny vola, hono, no hozatry ny ady. Marina loatra io fiteny io ho an’ny politika satria iaraha-mahita fa misy fiantraikany amin’ny isam-bato azony ny habetsaky ny vola kirakirain’ny kandidà amin’ny fotoam-pifidianana. Noho izany dia tsy maintsy dinihina lalina haingana ny lalàna mifehy ny famatsiam-bola eo amin’ny sehatra politika. Ny Lalàna 2011-012 tamin’ny 09 septambra 2011 mikasika ny antoko politika aloha dia efa mirakitra fepetra momba ny famatsiam-bolan’ny antoko...
Misavorovoro fiatomboka ny Repoblika faha-IV
Samy nanantena na nanandrana nanantena daholo ny rehetra tamin’ny 25 janoary 2014. Nandiso fanantenana ihany saingy nakasitrahan’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fomba nifidianana ny filohan’ny repoblika sy ny solombavambahoaka namarana ilay Tetezamita nitatra ohatrany sima misioka. Nisy tsirim-panantenana mba niverina, nohamafisin’ny fanomezan-toky avy amin’ny Filoha voafidy, tamin’ny andro nanaovany ny ...
Zava-misy mianjady amin’ny mponina isan’andro vaky ny jiro tapahina, tsy eto Antananarivo fotsiny, fa any amin’ny ankamaroan’ny toerana mahazo Jirama, izany hoe toerana mahatratra ny 90 any ho any. Mihena ny zava-bita, simba ny fitaovana ary miharomotra hatrany ny mpanjifa, izany no anisan’ny vokatra aterany. Am-polo taonany maro no tsy nahay nitsinjo lavitra ny Fanjakana, no nanjaka ny fitantanana tsy mahomby sy ny fitavanana ny vola, no tsy nitsahatra nitotongana ny...
« Fampihavanana » : inona no tena famaritana marina an’io teny io, dradradradrain’ny rehetra izy io nefa tsy mitovy ny fandraisan’ny tsirairay azy, ohatra ny efa mpitranga matetika eto Madagasikara ? Mipoitra ho azy avy amin’izany ny fanontaniana hoe iza no hampihavanina amin’iza, efa noresahina matetika izany, ary anisan’ny nanao izany ny SeFaFi1 : moa ve ireo samy filoha teo aloha ? Sa ny samy mpanao politika ? Sa ny mpanao politika sy ny vahoaka ? Sa ny vahoaka sam...